कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको होला सरकारले हैन : मन्त्रि खतिवडा,के भन्नुहुन्छ तपाईं ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको होला सरकारले हैन : मन्त्रि खतिवडा,के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुर्ननियुक्ति दिएको भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताए´ ।उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको होला,अर्थमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले भने,सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन ´।सरकारले घिसिङलाई पुर्ननियुक्ति दिएको भन्ने लेखाई र बोलाईमा कुनै सत्यता नभएको बताए´ ।
गत मङ्गलबार प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनः नियुक्ति गरेको खबर भाइरल भएको थियो ।घिसिङको नक्कली ट्वीटर एकाउन्टबाट समेत यसको प्रचार भएको थियो´ । तर, पछि सरकारले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नगर्ने सुचनाहरु बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ´।
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले यसबारे आज प्रष्ट पार्दै पुनः नियुक्ति नदिएको प्रष्ट पार्ने क्रममा व्यङ्ग्य समेत गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ´ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङको पुनः नियुक्तिको विपक्षमा उभिएको बुझिएको छ । घिसिङ पछिल्लो समय लोकप्रीय बन्ने दौडमा केन्द्रित रहेको भन्दै ओली असन्तुष्ट रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ´ ।
Previous कुलमानलाई हरिवंशको साथ: उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौं, अँध्यारो पार्नेलाई खोजी-खोजी हटाऔं,,,हेर्नुहोस्।
Next कु’लमान नै कि’न चाहन्छन् आ’म मानिस ?,,, आफ्नो बिचार राख्दै सेय’र गरौ।